ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: လင်နှင့်မယား ဟာသများ
ZOLZOL | 12:13 AM | ဟာသ
ZOLZOL | 12:13 AM |
လင်။ ။မယားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိသလား? မယားဆိုတာ ပြန်မပြောဘူး။ အမြဲတမ်း နောင်ဂျိန်ချနေတာကို ပြောတာပေါ့။
မယား။ ။မဟုတ်ဘူး အချစ်….အမြဲတမ်း ငပေါကြီး ဖြစ်နေတာကို ပြောတာ။
မယား။ ။ကျွန်မက သတင်းစာလေးဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါမှ နေ့တိုင်းရှင့်လက်ထဲမှာ ရှိနေနိုင်မှာပေါ့။
လင်။ ။မောင်ကလည်း ခင့်ကို သတင်းစာဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါမှ နေ့တိုင်း သတင်းတွေ နေ့တိုင်းရနေမှာပေါ့။
ဆရာဝန်။ ။မင်းယောက်ျား….ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ အနားယူဖို့လိုနေပြီ။ ဟောဒီမှာ အိပ်ဆေးတွေ။
မယား။ ။ကျွန်မက သူ့ကို ဘယ်အချိန်ဆေးတိုက်ရမှာလဲ။
ဆရာဝန်။ ။အဲဒီဆေးတွေက မင်းသောက်ရမှာ…
မယား။ ။ရှင်…ဘယ်လောက် အ-သလဲ သိချင်လို့ ရှင့်ကို ကျွန်မလက်ထပ်ခဲ့တာ။
လင်။ ။ငါက မင်းကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းကတည်းက ငါဘယ်လောက် အ-တယ်တယ်ဆိုတာ မင်းသိခဲ့သင့်တယ်။
လင်။ ။ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ ငါပျော်ချင်တယ်ကွာ။ ဒါ့ကြောင့် ငါရုပ်ရှင်လက်မှတ် ၃ စောင်ဝယ်ခဲ့တယ်။
မယား။ ။ဘာလို့ ၃ စောင်ဝယ်လာတာလဲ။
လင်။ ။မင်းနဲ့မင်းမိဘအတွက် ၀ယ်လာတာလေ။
မယား။ ။ကျွန်မသာ ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို တက်နိုင်ခဲ့ရင် ရှင်က ကျွန်မကို ဘာပေးမှာလဲ။
လင်။ ။ချစ်ခင်စွာနဲ့ တစ်ချက်တွန်းလိုက်မှာပေါ့ကွယ်။
မေးခွန်း။ ။မင်းရဲ့မယားမွေးနေ့မှာ အလွန်သတိရစေမယ့်နည်းလမ်းကဘာလဲ။
အဖြေ။ ။သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကို မေ့ထားလိုက်မယ်လေ။ ဒါဆို သူ ဘယ်တောမှ မမေ့တော့ဘူးလေ။
လင်မယားနှစ်ယောက် စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ မယားက လင်ကို ပြောတယ်။
“ရှင်…သိထားသင့်တယ်။ ကျွန်မက ရှင့်ကို ရူးလို့သာလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေ”
Husband: Today is Sunday & I have to enjoy it..
The husband replied, "Yes dear, but I was in love and didn't notice!
ဆီလျော်အောင် ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။ ဝေဖန်မှုကို ကြိုဆိုပါသည်။
Posted by ZOLZOL at 12:13 AM